LG dia manolotra ny V10 vaovao miaraka amin'ny efijery roa | Androidsis
LG dia manambara ny V10, finday avo lenta vaovao misy rindrambaiko roa natao ho an'ny atiny multimedia
Tao anatin'ny maraina isika izay nandehanan'ny vaovao avy any LG, rehefa nahalala ny taranaka faharoa Watch Urbane, izay anisan'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra ny fahaizana manao antso, ankehitriny isika dia manana fampidirana smartphone vaovao tonga mitokana andiany vaovao.
LG dia nanaparitaka ny finday avo lenta vaovao amin'ny endrika V10. Ka ny tsaho milaza ny fahatongavan'ity finday vaovao ity dia marina, ary tsy ho G4 Note na G4 Pro izany amin'ny farany. Ny LG V10 dia toa zavatra vaovao satria ny finday voalohany V, andiany vaovao mikendry ny hihaona amin'ireo mpampiasa mampiasa ny findainy ho an'ny traikefa multimedia.
1 Fizarana faharoa
2 Finday ho an'ny atiny multimedia
Ny LG V10 dia miavaka amin'ny fahaizan'ny haino aman-jery marobe toy ny fakan-tsary roa anoloana, maodely horonantsary manual ary izay mety ho efijery faharoa. Mikasika ny famolavolana dia miatrika smartphone isika fomba fijery somary tapa-kevitra ary manana fanoherana lehibe izy io noho io hoditra silikona manarona ny vy tsy misy fangarony io an'ity telefaona ity.
Ny safidy lehibe hafa dia ny efijery faharoa. Ankoatra ny efijery QHD IPS Quantum efa lehibe 5,7-inch dia misy kely kokoa atsofoka eo an-tampony eo aloha. Ny fiasa manokana an'ity efijery faharoa ity dia mitoera foana mba hahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny antsipiriany isan-karazany nefa tsy mila manokatra ilay lehibe, izay midika, mialoha, ny fitsitsiana amin'ny bateria.
Ity efijery faharoa ity dia azo ampiasaina mampiseho fampandrenesana, hafatra na antso ho avy. Amin'izany fomba izany dia tsy ho tapaka ny mpampiasa raha mijery horonantsary avy eo amin'ny efijery lehibe izy, ary amin'ny lafiny iray dia mitovy amin'ny asan'ny Edge S6 ihany io.
Finday ho an'ny atiny multimedia
Ny LG V10 koa dia manana fahaiza-manao firaketana horonantsary sy feo tena tsara. Mitohy ihany koa ny fahombiazan'ny fakantsarin'i LG G4, ka vintana ireo mpankafy sary an-tsaina smartphone afaka maka sary avo lenta miaraka amin'ny Fakan-tsary aoriana 16MP miaraka amin'i OIS 2.0 / F 1.8 ary ny eo aloha misy fakan-tsary 5MP miaraka amina lantera roa.
Araka ny efa noresahiko, rehefa tonga ny fotoana firaketana dia afaka mahazo ilay fahatsapana ianao manaova video ho matihanina miaraka amin'ny maody horonantsary an-tanana izay anisan'ireo fiasa sasany dia misy Steady Record, Snap Video, Quick Video Editor, Quick Share, Audio Monitor ary sivana noho ny fitabataban'ny rivotra. Azonao atao ny misafidy eo anelanelan'ny fanapahan-kevitra telo samihafa amin'ny fandraisam-peo toa ny HD, FHD na UHD ary ny lafiny roa, 16: 9 na 21: 9.
Miaraka amin'ireo fakantsary roa eo anoloana dia azonao atao makà selfie 120 degre ary ny fenitra 80. Ity finday ity dia misy koa fiasa firaketana Multi-view izay mampiasa fakan-tsary rehetra an'ny V10 hisamborana zoro samihafa amin'ny fotoana iray.
Qualcomm Snapdragon 808 puce
Fampisehoana QHD IPS Quantum 5,7-inch miaraka amin'ny 2560 x 1440 513ppi
Fampisehoana IPS Quantum IPS 2,1-faharoa faharoa miaraka amin'ny 160 x 1040 sy 513 ppi
RAM fahatsiarovana ny 4GB
Fitehirizana anatiny 64GB
Fakan-tsary 16 MP aoriana misy F1.8 / OIS 2.0
Fakan-tsary eo anoloana 5MP misy masolavitra roa
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0, 3G, LTE-A Cat. 6
Batterie 3000 mAh (azo ovaina)
Refy: 159,6 x 79,3 x 8,6 mm
Lanja: 192g (?)
Ny LG V10 dia ho hita amin'ny loko dimy ary amin'izao fotoana izao tsy fantatsika na ny fisiany na ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia manambara ny V10, finday avo lenta vaovao misy rindrambaiko roa natao ho an'ny atiny multimedia
Google sy Microsoft dia nanao sonia ny fandriam-pahalemana tamin'ny adin'izy ireo
LG dia manolotra ny andiany faharoa amin'ny Watch Urbane miaraka amin'ny fifandraisana LTE